ဝန်ကြီး – Nyang Media
Fact Checkအောက်တိုဘာ 07, 2020
ဟော...ဖြစ်ပြန်ပြီ နောက်တစ်ယောက် မျိုးတုံးတော့မယ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ အစချီထားတဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး အကြောင်း ဖြန့်ချိထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် အကြောင်း ပြောပြလိုပါတယ်။ သည်သတင်းကို အောင်အောင် လို့ အမည်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ပိုင်ရှင် က " ထမိန်ခြုံများအား နှိပ်ကွပ်ရေး...
Fact Checkမေ 07, 2020
သရုပ်ဖော်/ဓာတ်ပုံ / Freepik ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် အသစ်ဖြစ်ပြီး ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပုံ၊ ကူးစက်နိုင်မှု အဟုန် သည်လည်း ပြောင်းလဲ လျက် ရှိသည်ကို သတိပြုရမည် ... ပြည်သူအချို့၏ သွားလာနေထိုင်မှုများသည် COVID -19 ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုများကို...
Fact Checkမတ် 29, 2020
Fact Checkဇန်နဝါရီ 31, 2020
MSCO/KKO ကျမက ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကို ကလေးနှစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး နှစ်ရက်တိတိ လမ်းလျောက်ပြီးလာခဲ့ရတာ။ ကျမဘဝမှာ ... ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက် ရဲ့ခံစားချက်ပါ။ကျနော် အားလုံးကို တောင်းပန် ပါတယ်။ အသက်ငါးဆယ်နီးပါပြီ။အသက်ငါးဆယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး အရသာ မခံစားခဲ့ရပါဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
Fact Checkဇန်နဝါရီ 30, 2020
MSCO/ KK / ဦးကျော်ခိုင်ဝင်း ငါက ပျားဖွပ်တဲ့လူပဲ လက်မှာကပ်တဲ့ပျားရည်တော့ စုပ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ အခြေအနေ ကျနော်တို့ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှာရှိနေ တယ်။ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောရရင် ... ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက် ရဲ့ခံစားချက်ပါ။ကျနော် အားလုံးကို တောင်းပန် ပါတယ်။...
SM /ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်စန္ဒာမင်း ဒီလိုမျိုးပြောခြင်းကြောင့် နံပါတ် တစ် ကိုယ်တွေကို ပါတီကမကြိုက်ဘူး၊ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာကို လူကြီးတွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာ ကျမတို့နားလည်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ... အစိုးသစ်လက်ထက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရန်ကုန်လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးဝေဖန်မှုများဖြင့်...
Fact Checkစက်တင်ဘာ 25, 2019
SNLD / နမ္မတူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခမ်းအေး ကျွန်တော်တို့အလုပ်က ဘာလဲဆိုတာသိလား" တဲ့၊ ကျွန်မက "မသိပါဘူး" လို့ဆိုတော့ ဒုဝန်ကြီးက "ကျွန်တော်တို့က အုပ်ချုပ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲနေတာ၊ အောက်ခြေကခွေးတွေကို ဆင်းကြည့်နေစရာမလိုဘူး" လို့ ပြောလိုက်တာ။ ကျွန်မလည်း...